10 Yemahara Mapurogiramu neMitambo yenguva Yakatemerwa | IPhone nhau
Gumi emahara maapplication nemitambo kwenguva shoma
Ignacio Sala | | IPhone maapplication, App store, IPhone mitambo
Semutemo wenguva dzose, ini ndinowanzo kurudzira kunyorera kana mitambo inowanika kurodha mahara zvakasununguka, asi panguva ino, ikozvino yeKisimusi yava kusvika, ndakatenda kuti sarudzo yakanakisa ndeyekutora pamwechete. Munyaya ino uchawana mitambo mishanu uye zvishanu maapplication kuti utore mahara paApp Store. Panguva yekutsikisa ichi chinyorwa, zvese zvinoshandiswa nemitambo zviripo zviri kutengeswa.
1 Kudonha Iyo Kuku 2
4 mbudzi Simulator
6 Mhepo -Kurara Zorora Fungisisa & Ruzha ruzha ruzha
7 Blur Bokeh - Chiedza Chemufananidzo Mhedzisiro
8 Feelca Mavara
9 PhotoArtista - Oiri
10 Yemukati Dhizaini yePadad
Kudonha Iyo Kuku 2
Chuck atorwa neakaipa monkey runway boss. Kuti utize sekasi, iwe unofanirwa kubatsira Chuck kuita zvekunyudza mudziva. Kudonhedza Iyo huku inosanganisira mapuzzle zana ayo isu tichava nenguva yakanaka. Mutengo wakajairika weDrop Iyo Kuku 100 i2 euros uye inotipa isu mukati-app kutenga.
Akira idiki ninja munzira yekuve Sensei. Nzira chete yekuzadzisa magumo ekupedzisira ndeyokupona pachigadziko kwemaminetsi matatu. Sezvo nguva inoenda nechigadziko chinotanga kufamba asi isu tinofanirwa kuchengetedza zviyero sezvazviri. Iyo Pedestal ine mutengo wenguva dzose muApp Store ye0,99 euros.
Adventure Kupfuura Nguva inotora vatambi parwendo kuburikidza nechakavanzika chitsuwa. Mutambo watinozowana 150 enharaunda dzakasiyana mukutsvaga zviyeuchidzo zvinokutendera kuti ugadzirise mapuzzle atinowana munzira. Adventure Beyond Nguva ine mutengo wenguva dzose we1,99 euros muApp Store.
Adventure Beyond Time2,29 €
Mazuva mashoma apfuura ndakaenda kumberi ndikakuzivisa kuti uyu mutambo wekuda kuziva watinopinda muganda rembudzi ndiko kushandiswa kwesvondo, saka unozowanikwa mahara kusvika China chinotevera. Mbudzi Simulator ine mutengo wenguva dzose we4,99 euros muApp Store.
mbudzi Simulator3,49 €
Cubway rwendo nerunyararo nyaya inotsanangura hupenyu hupenyu hwekuzvarwa patsva. Tungamira iyo cube kuburikidza nenzira refu yenjodzi nematambudziko uye shanyira nzvimbo zhinji dzinonakidza uye dzisinganzwisisike. Cubway ine mutengo muApp Store ye 2,99 euros.
Mhepo -Kurara Zorora Fungisisa & Ruzha ruzha ruzha
Kune avo vese vanhu vanoda kutora maminetsi mashoma kuti vazorore, Windy ndiko kunyorera. Windy inotipa zvinyorwa zvemhepo zvakasikwa nemabasa anoyevedza ounyanzvi kuti ubatsire kurara, kuzorora, kudzidza kana kufungisisa. Windy ine mutengo wenguva dzose muApp Store ye 2,99 euros.
Mhepo Yakachena Ruzha Kurara Inonzwika2,29 €
Blur Bokeh - Chiedza Chemufananidzo Mhedzisiro
Iyo Bokeh mhedzisiro ndeimwe yeanonyanya kushandiswa zviwanikwa kwete chete mukutora mifananidzo asiwo mu cinema, kana iwe uchida kukwevera kutarisisa kune imwe nhanho muchiitiko pasina zvinokanganisa. Neichi chishandiso tinogona kukanganisa mamiriro pamwe nekuwedzera akasiyana mapoinzi echiedza kuti agadzire iwo mhedzisiro. Iyo ine 85 mhedzisiro yekugona kusarudzika mapikicha edu kusvika pakakwirira. Blur Bokeh ine mutengo wenguva dzose we2,99 euros muApp Store.
Blur Bokeh3,49 €
Feelca Colores inowedzera zvimwe zvetoni toni hunhu hwekare reel mafirimu, ichitipa isu mhedzisiro iyo dzimwe nguva inopfuura yekuda kuziva. Kune imi mose munoda mafirita, chishandiso ichi chingave chitsva uye chakakosha kuwanikwa. Felca Colors ine mutengo wenguva dzose we0,99 euros muApp Store.
Feelca C1,09 €
PhotoArtista - Oiri
Seizvo zita rayo rinoratidzira, nekuda kwePhotoArtista - Oiri tinokwanisa kushandura mafoto edu kuti ave macanvase akanaka kuti azoprinta gare gare sekunge iwo pendi. PhotoArtista ine mutengo wenguva dzose muApp Store ye4,99 euros.
PhotoArtista - Oiri5,49 €
Yemukati Dhizaini yePadad
Seizvo zita rayo rinoratidzira, Yemukati Dhizaini chikumbiro chemukati dhizaini, chishandiso chine yakapusa mushandisi interface iyo inobvumidza chero munhu kugadzira kana kuronga kugadziridza mumaminetsi mashoma. Yemukati Dhizaini yeIpad ine mutengo wenguva dzose we7,99 euros muApp Store.
Yemukati Dhizaini yePadadvakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » App store » Gumi emahara maapplication nemitambo kwenguva shoma
LG ichave inonyanya kugadzira yekupeta skrini yeApple, Microsoft neGoogle